Ahoana ny fomba hampihenana ny fivorian'ny alika be loatra? | Tontolo alika
Ahoana ny fomba hampihenana ny fivorian'ny alika be loatra?
Maherin'ny folo alina ny fitarainana aseho isan-taona any amin'ny firenena rehetra tabataba vokatry ny alika mivovo ary ny feon'ny biby amin'ny tranga sasany dia mety misy fanelingelenana ny filaminan'ny sasany avy amin'ny fahasosorana amin'ny tabataba miverimberina.
izany any amin'ny firenena sasany dia heverina ho heloka bevava izanyAny amin'ny firenena eropeana sasany dia saziana herintaona an-tranomaizina sy onitra XNUMX €, ankoatry ny tambiny azo tamin'ilay ratra, dia nametraka fepetra ny mpitsara mba hampijanonana ny korontana.
Ahoana ny fomba hahatonga ny alika tsy hiditra be loatra?
Ny fametrahana fitsapana rivotra fisarahana hisorohana ny alika tsy hanakaiky ny mpifanila vodirindrina, ny fananganana sakana tsy mitabataba, mamorona barazy maloto, mametra ny isan'ireo alika avela amin'ny trano sy / na mitazona ny biby lavitra, ohatra ny miala ny manodidina.
Na izany aza, ny fomba mora indrindra dia manakarama mpampiofana alika matihanina izay, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia hamela vahaolana malefaka sy fiofanana mahomby. Ny marina dia alika dimam-polo isan-jato no mijaly a aretin-tsaina miteraka fisarahana Ny antony nateraky ny alika tsy hita ny tompony na noho izy irery tao an-trano dia manomboka izany rehefa irery irery ilay alika mandritra ny minitra vitsy na segondra vitsy aza.
Ilay alika, maniry fatratra ny fialàn'ny tompony, dia handrava izay rehetra manodidina azy amin'ity fomba ity aondraho ny alahelonao ary tsy misy fisalasalana momba ny valifaty, izay fahatsapan'olombelona tanteraka. Mbola tsy misy lolompo amin'ny alika, famoizam-po lalina fotsiny, ny tahotra ny tsy hahita ny olon-tianao intsony.
Ny karazan'aretina hafa dia mety miteraka ireny hodi-kazo mahery ireny
Ny antony iray dia matahotra ny alikanao, tsy miaro loatra ny faritaniny izy, tsy tia fiaraha-monina, hyperactive, hypothyroid izy.
Matetika loatra, ny tompon'ny alika izay mivovo matetika dia misafidy a vozon'akanjoko herinaratra, izany dia manaitra tampoka isaky ny mibontsina ny alika, saingy fahadisoana lehibe izany. Raha mampiasa ny iray amin'ireto ianao dia lasa mpanohana ny fanararaotana biby.
Rojo vy Citronella dia mahomby mandritra ny 15 andro, izay rehefa zatra ny fofona ilay alika ary manomboka mivovo indray dia hitohy tsy ho afa-po ny mpifanila vodirindrina aminao ary ho hitanao ny tranonao isak'alina feno fofona hafahafa tokoa.
Volafotsy manafintohina elektrika dia mifanohitra tanteraka amin'ny fenitra etika misy antsikas sy ny fahitanay ny fifandraisana amin'ny alika olombelona. Alao an-tsaina ny stimulator hozatra napetraka amin'ny hery lehibe indrindra, izay mifandray mivantana amin'ny tadim-peonao, izany dia manondro ny fomba ahafahan'ny lalàna manome alalana an'ity karazana fitaovana fampijaliana ity.
Azo inoana koa fa ajanony ny hetsika rehetra sao matahotra fanaintainana amin'ny hetsika kely indrindra, raha toa ka azo atao ny manitatra hafa olan'ny fitondran-tenaFiarovan-tena, famoizam-po, fanimbana, satria tsy afa-po ny alikanao ary mbola mahatsapa fa ilaina ny manala ny adin-tsaina aterak'io fanahiana fisarahana io izay mbola eo.
Tsy mikasika ny fandraisana andraikitra izany ireo soritr'aretina mitranga amin'ny alikao, fa raha ny antony. Noho izany, tsy maintsy fantarintsika aloha ny anton'ity karazan'akanjo ity ary iray ihany mpanazatra alika amin'ny fitondran-tena biby afaka mametraka diagnostika marina ary manome toro-lalana fitsaboana sahaza ny alikao.
Raha manaraka tsara ny toro-làlanay momba ny fiofanana ianao, dia mety hahatonga ilay alika ireo, ary afaka andro vitsivitsy, ajanony ny fihinanan'ireto tsy misy fitsaharana ireto, satria aretin-tsaina tena mahazatra, nefa mora fehezina.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga izany dia tsy manome toky ny alikao fotsiny, fa afaka manampy azy ho matotra (isan'ny alika mijanona eo amin'ny sehatry ny alika kely) ary mampiseho fa voajanahary io fitokanana io ary azo resena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Ahoana ny fomba hampihenana ny fivorian'ny alika be loatra?
Manao ahoana ny alika Miniature Pinscher
Fanafody an-trano hampidina ny tazo alika